The Bros ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
မောင်နှမတွေတိုင်းမှာ တွေ့တိုင်းစကားနိုင်လုပြီး ရန်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ မောင်နှမတွေရှိတတ်ကြတယ်ဟုတ်
ဘယ်လိုပဲမတည့်မတည့် အချိန်တန်တော့ သွေးနီးတတ်တာလည်း ဒီမောင်နှတွေပဲလေ ?
ခုလည်း ကိုယ့်လို Comdeyကြိုက်တတ်သူတွေအတွက်The Bros ဆိုတဲ့ Korea Comdeyကားလေးကိုညွှန်းပေးချင်လို့ ?
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ မြင်ရမှာက Seok Bong နဲ့ Joo Bong ဆိုတဲ့ညီအစ်ကို ၂ယောက်
သူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စကားမပြောကြတာ နှစ်တော်တော်ကြာပြီ
Seok Bongကကျောင်းဆရာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေတူးဖော်ရတာ စိတ်ဝင်စားတယ်
သူ့ရသမျှလစာတွေကို တူးဖော်ရေးပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်း အသက်ပဲကြီးလာပြီ အိမ်ပိုင်တောင်မရှိပဲ အကြွေးသံသရာထဲနစ်နေတဲ့သူ
သူ့ဘဝရဲ့ရည်းမှန်းချက်က ဂျပန်တွေနယ်ချဲ့စဉ်က ပျောက်ဆုးံသွားတဲ့ ရွှေဆင်းတု၂ဆူကိုရှာပြီး Billionaire လုပ်ရန်စိတ်ကူးယဉ်နေသူ
Joo Bongကတော့ Seok bongရဲ့ညီဖြစ်တယ်
သူကသူ့အကိုနဲ့မတူတာက တော်တယ်ထက်မြက်တယ် အလုပ်ကို စည်းကမ်းတကျနဲ့လုပ်တတ်တယ်
ပြီးတော့ဘဝကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပေါ့
တစ်နေ့တော့ သူလုပ်နေတဲ့ projectမှာ အငြင်းပွားစရာကိစ္စဖြစ်ပြီး သူ့ကိုအလုပ်ထုတ်ဖို့ပြင်နေကြတယ်
အာ့အချိန်မှာပဲ Seok Bong နဲ့ Joo Bongတို့ရဲ့ အဖေဆုးံသွားကြောင်းသတင်းရောက်လာတယ်
အာ့ဒါနဲ့သူတို့ကအဖေ့ရဲ့နာရေးရှိတဲ့နယ်ကို ပြန်ရင်း Aurora ဆိုတဲ့အရမ်းလှတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကားနဲ့တိုက်မိသွားချိန်မှာပဲ ပြသနာတွေက စလာပါတော့တယ်
– ကဲ အာ့ဒီတော့ Aurora ဆိုတာဘယ်သူလဲ ဘာ့ကြောင့်ဒီဘုဂလန့်ညီအစ်ကိုနဲ့ လာဆုံရတာလဲ ?
– ဆုံပြီးတဲ့နောက်ကော ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ?
-Seok Bongတို့နဲ့ သူ့အဖေရဲ့ဆက်ဆံရေးကကော ဘယ်လိုရှိသလဲ?
-Joo Bong နဲ့ Seok Bongကကော စကားပြန်ပြောကြမလား ?
-Seok Bong ရှာနေတဲ့ ရွှေဆင်းတုတွေကိုကော ရှာတွေ့နိုင်မလား?
-မထင်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကကော ဘာတွေလဲ
ဆိုတာတွေကိုသိချင်ရင် ဒီကားလေးကို ဆက်ကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုတွေတောင် တလွဲတွေဖြစ်ပြီး ရယ်နေရမယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးနော် ?
Translator: Saung Hnin Oo
Openload.co Myanmar 822MB Download Soliddrive.co Myanmar 822MB Download